‘नेपाल आइडल’मा आज भोटिंग हुने या नहुने: के भन्छन् एपी वानका प्रवन्ध निर्देशक ?  Hamrosandesh.com
‘नेपाल आइडल’मा आज भोटिंग हुने या नहुने: के भन्छन् एपी वानका प्रवन्ध निर्देशक ?
अघिल्लो हप्ता नेपाल आइडलले एक प्रतियोगीलाई एल्मिनेट (हटाउनु) नगरेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यस निर्णय बिरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतले यस बारे अल्पकालीन आदेश दिँदै गत बिहीबारको भोट नगन्नु भन्ने आदेश दिएपछि ‘नेपाल आइडल’ ले आज भोटिङ खुल्ला नगर्ने भएको छ ।
चर्चित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को प्रसारक संस्था एपी वान टेलिभिजनका प्रवन्ध निर्देशक लक्ष्मी पौडेलले आइडलको भोटिंग विवादबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले अघिल्लो हप्ताकै भोटिङको आधारमा आज एक प्रतिस्पर्धी बाहिरिने बताएका छन् । उनले भने – ‘अस्तीको भोटिङकै आधारमा आज एलिमिनेसन गरिने छ, अस्ती कसको भोट कति आयो भन्ने कुरा हामी शुक्रबार अदालतलार्इ बुझाउदै छौं ।’
सम्मानित अदातलको आदेशलार्इ सम्मान गर्ने भन्दै ‘नेपाल आइडल’को आयोजकले आज भोटिङ खुल्ला नहुने बताएको हो । गत हप्ता ४ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये कसैलार्इ पनि आउट नगरेपछि जिल्ला अदालतमा ‘नेपाल आइडल’ शो विरुद्ध मुद्दा परेको थियो । वुधबार अदालतले यो साताको भोटिङ काउन्ट नगर्न आदेश दिएको थियो । ‘एपी वान टेलिभिजन’बाट प्रशारण भैरहेको ‘नेपाल आइडल’को अन्तिम ४ मा निशान भट्टरार्इ, प्रताप दास, वुद्ध लामा र सागर आलेमगर पुगेका छन् ।
आज गत हप्ताकै भोटिङको आधारमा एक जना शोबाट बाहिरिनेछन् भने अन्तिम ३ मा पुगेका प्रतिस्पर्धीहरुले ‘नेपाल आइडल’को उपाधि जितका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।